Midowga Musharixiinta oo ku daatay dabin Farmaajo u qoolay | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharixiinta oo ku daatay dabin Farmaajo u qoolay
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa ku guuleystay inuu kala furfuro Golaha Midowga Musharixiinta, kadib markii uu u adeegsaday Fahad iyo Rooble, oo qaarkood u sameeyay ballamo aan beyd run ka ahayn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib dhowr sano oo isku aragti ay ka ahaayeen arrimo badan oo siyaasadeed, Midowga Musharixiinta Soomaaliya, ayaa ugu danbayn kala dareeray, waxayna u muuqataa in ay lugta saareen jid uu Farmaajo jeexay, si ay u kala jabaan.
Tan iyo bartamihii bishii May, waxaa meesha ka baxay doorkii Midowga, waxayna dhowr jeer soo kala saareen waraaqo aysan ku mideysneyn, taas oo bannaanka keentay kala qeybsanaan xooggan oo ka dhex taagan Golaha.
Shaki kuma jiro in Farmaajo uu sameyn doono wax kasta oo uu ugu sii nagaan karo xukunka & inaan laga filan karin inuu qabto doorasho xor & xalaal ah, wuxuuna sida la rumeysan yahay hadda ku guuleystay kala furfurka darbigii uu muddada dhaafi waayay.
Qorshihiisa ugu weyn, wuxuu ahaa in xilliga doorashada la gaaro, iyadoo uusan jirin Midow Musharixiin, si uu kaga badbaado is-gaashaan buureysi siyaasi ah oo si sahlan kaga adkaada.
Farmaajo, wuxuu qeyb ka mid ah Musharixiinta Mucaaradka u adeegsaday Fahad Yaasiin, halka uu qeyb kalana u wakiishay Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta Rooble, kuwaas oo saaxiibtinimo hore iyo ballamo aan waxba ka jirin ku xera galiyay.
Musharixiinta oo hore ugu heshiin waayay in si toos ah loo ciribtiro nidaamka Kalitaliska, bishii April, hadana kala dareeray markii la gaaray xilligii faltanka, ayay dadka siyaasadda u dhuun duleela ku sunteen, “Mufakiriin gaabis ah”.
Sida ay fahansan tahay KON, inta badan musharixiinta ayaa ka maqan dalka, qeybta ugu xooggan ayaana ku sugan dalka Kenya oo ah saldhigga siyaasadda Soomaaliya xilliyada Doorashada.